Impilo yasolwandle ezigxotsheni nasezindaweni ezishisayo isongelwa ukufudumala kwembulunga yonke nokudoba ngokweqile | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Impilo yasolwandle ezigxotsheni nasezindaweni ezishisayo isongelwa ukufudumala kwembulunga yonke nokudoba ngokweqile
Bayanda abantu bethu abahlala kulo mhlaba osuvele usulinyazwe kakhulu. Izinsizakusebenza ebesinazo phambilini ziyaphela kancane kancane. Umhlaba awukwazi ukuzinikela ngokwengeziwe. Futhi lokhu yinto esiyibonayo nsuku zonke: izinga lokushisa lomhlaba jikelele liyakhula, izingongolo ziyancibilika zibangele ukwanda kolwandle, izenzakalo zezulu ziya ngokwanda,… phakathi kweminye imicimbi eminingi esikutshela yona kubhulogi.
Ezindaweni ezishisayo nasezigxotsheni banezinkinga ezimbili ezinkulu: enye ukushisa komhlaba, kanti enye ukudoba ngokweqile.. Impilo yasolwandle kuzo zombili izifunda isengozini.
Ucwaningo olwenziwe ngabaphenyi baseSpain, Australia naseNew Zealand, olushicilelwe kumagazini iScience Advances, luyakufakazela lokhu. U-2016 ubushisa kakhulu emlandweni orekhodiwe, futhi lokho kushisa kwamuncwa ingxenye enkulu yolwandle. Ngokuya ngesimo, izilwane zasolwandle zinenkinga enzima yokuya phambili.
Ngokokuqala ngqa uphenyo lubheka, ngokusebenzisa izithombe zesathelayithi, ukwanda kwamazinga okushisa olwandle, izinguquko kumisinga yolwandle namazinga okukhiqiza olwandle kule minyaka engamashumi amathathu edlule.
Ngakho, Abaphenyi banganquma ukuthi yiziphi izindawo ezinokuhlukahluka okuningi kwezasolwandle eziphakathi kwezithinteke kakhulu ngokushisa komhlaba, okuyizindawo eziseduzane nezindawo ezishisayo nezigxobo, njengogu olusempumalanga ye-United States naseCanada, indawo ye-equator, iNorth Sea noma eningizimu-mpumalanga ye-Australia neNew Zealand.
Ngokuqhathanisa imininingwane yocwaningo nolwazi lomsebenzi wokudoba eminyakeni engama-60 edlule babona ukuthi izindawo ezinezinhlobonhlobo eziningi zezinto eziphila olwandle nazo zithinteka kakhulu ekudobeni ngokweqile. Ngalesi sizathu, imithelela yokudoba kwezimboni kanye nesimo sezulu kumele kubhekwe "ngasikhathi sinye ukulondolozwa" kwalezi zindawo, ngokusho kukaFrancisco Ramírez, umcwaningi eDoñana Biological Station (EBD-CSIC), owangeze ngokuthi "Akukona ukuqeda umsebenzi wokudoba kepha kumayelana nokusebenzisa izinqubomgomo zokongiwa kwemvelo".
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Impilo yasolwandle ezigxotsheni nasezindaweni ezishisayo isongelwa ukufudumala kwembulunga yonke nokudoba ngokweqile
Intombazane eneminyaka engu-16 izohamba i-Arctic ibhalise izinja zaseGreenland
Amahlathi asimeme ayindlela enhle yokushintsha kwesimo sezulu